म राजीनामा पत्र लेख्दिन : प्रधानमन्त्री ओली – Naya Suchana
संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन राजीनामा दिएनन् ? धेरैको प्रश्न छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सर्वोच्च प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देउ नभनेको बताए । हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा उनले आफूमाथि नैतिक प्रश्न छ भन्ने पनि नरहेको जिकिर छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक हार त भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘के मा हरायो ? राजीनामा देउ भन्यो ? अदालतले यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो ?’
आफूले राजीनामा दिए सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अस्थिरता निम्त्याएको देखिनजे उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गरेर गल्ती गरेछु भन्ने लाग्या छ ? भन्ने प्रश्नमा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले गरेको निर्णयले यो स्थिति होइन, देश चुनावतिर जान्थ्यो । समस्याको समाधान हुनेतिर जान्थ्यो ।’
आफूले आवश्यक परे विश्वासको मत लिने लगायतका बाटो समाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘…मैले अरु बाटा समाउनसक्छु । आवश्यक परे विश्वासको मत लिन सक्छु । विश्वासको मतमा मलाई हराउन पर्यो नि’ ओलीले भने, ‘विश्वासको मत पनि लिइन भने अर्को पनि मेरो बाटो हुनसक्छ ।’
कांग्रेस र जसपाको साथ पाउने दाबी
२३ गते संसद बैठक बस्ने र अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसलाई पराजित गर्ने दाबी गरे । त्यसका लागि कांग्रेस र जसपाको साथ पाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । उनले भने, ‘कांग्रेस र मधेसवादी दलले राजनीति गरेको, पार्टी खोलेको कुनै अमुक महत्वकांक्षी व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हो ?’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो मित्रता छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले लोकतन्त्रका लागि लड्ने आफूहरुको पुरानै समझदारी रहेको दाबी गरे । यद्यपि पछिल्लो सन्दर्भमा भने कुनै सहमति नभएको ओलीको प्रष्टीकरण छ ।
← एमालेको सम्पत्तिमा र्याल काढ्दै प्रचण्ड, भीम रावलले ३० लाख गायव पारे
सत्ता क्याप्चर गर्ने माधव नेपालको सपना पनि चकनाचुर